ရောင်းရန် 150kW အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုရန် 8kW အကောင်းဆုံး | အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုထောက်ပံ့
အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကို FMW အာဏာ 150kw မှတက် 8kw မကြာခဏဖြစ်ပါသည် အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက် အတူ powered ကျစ်လစ်သိပ်သည်း4ဆလင်ဒါသို့မဟုတ်6ဆလင်ဒါ ဒီဇယ် ဂျင်နရေတာစက် သေးငယ်တဲ့လယ်ယာသို့မဟုတ်အဆောက်အဦးမှလျှောက်ထားအင်ဂျင်နှင့်။ သူတို့ဟာနိုင်ပါတယ် ဖို့ဒီဇိုင်း စူပါအသံတိတ်မီးစက် အစုံ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်မြင့်မားဝယ်လိုအားနေသောအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအတိုင်းအတာထဲမှာ soundproof ဒီဇယ်မီးစက် ။
1. အသံတိတ်ဒီဇယ် Generator ကို (8kw-150kw)
အသစ်စက်စက် ရီကာဒို, Lijia နှင့် Styer စီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်
အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း Switch (A.T.S) မီးစက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိအခြေစိုက်စခန်း 8 နာရီလောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူဘောင်
အပြေး 8 နာရီထက်ပိုကြီးစိတ်ကြိုက်လောင်စာဆီတိုင်ကီ
ပြည်နယ်-စံမြင့်သော စွမ်းဆောင်ရည် Non-ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘက်ထရီ
High-သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ Cumtomized စူပါအသံတိတ်မိုး ရေမြှုပ်ခဲ
အနိမ့်ရေနံ ဖိအား, အပူလွန်ကဲ, Overload နှင့် overspeed ကာကွယ်မှု
အထူးစိတျအပိုငျးကဲ့သို့သော စွန်ခံ-သံမဏိသော့ချက်, ရေနံယိုစီးမှုစုပ်စက်, ဖုန်မှုန့် filter ကိုစသည်တို့ကို
ပြည်နယ်-စံအီလက်ထရွန်းနစ် ထိုကဲ့သို့သော cable ကို, circuirt အနိုင်အထက်, relay ကို, ဆီမီးခွက်, ဖျူးအဖြစ်, ကိရိယာကိုရပ်တန့်။
အပိုအင်ဂျင်နှင့် Alternator သည် filter ကို, gasket, nozzle, AVR, Rectifier အဖြစ်နှမြောရ။
စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူ Tool ကိုကိရိယာအစုံ မီးစက်အင်ဂျင်, နဲ့ Alternate ၏လက်စွဲ
Deluxe ကိရိယာသေတ္တာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အ tools များ၏အမျိုးပေါင်းအတူ။
3 ။ စံနှုန်းပြီးတော့လက်မှတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇယ်မျိုးဆက် 4. အားသာချက်
① high-နျ Standard ပစ္စည်းများနှင့်နှမြော။
●, diode, gauge, ထင်းရူး, AVR, screw နှစ်ခု, ဝက်ဝံ, ဆူညံသံရေမြှုပ်, ဝါယာကြိုးများ, တုန်ခါမှု-ကိုစုပ်ယူ မှစ. ထပ်ဆင့်လွှင်ဒါပေါ်ကြေးနီဝါယာကြိုး, သံမဏိပြား, မီတာ, controller စဘက်ထရီ AMF, ATS နှင့်ရန်။
●အလွန်-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှ FMW ပါဝါ manufactuer စံယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့် gensets ဒါပေမယ့်လည်း FMW ပါဝါမသာကို client ရဲ့ထူးခြားတဲ့တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီထိုကဲ့သို့စူပါအသံတိတ်မီးစက်, ကွန်တိန်နာပါဝါဘူတာရုံ, အသိဉာဏ်မီးစက်အဖြစ် gensets အမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
●ယာယီ-ပြည်နယ်ဗို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းrate≤ + 20% / - 15%
နောက်တစ်ခု : 500kW အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုရန် 150kW
ဘာသာရပ် : 150kW အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုရန် 8kW